Nyocha Na-ahụ Maka Ọdịdị Na-ahụ Maka Njikere - Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Nyocha Na Na Na Na Na Na Na Na
Ndị ọkà mmụta sayensị ejirila ọmụmụ ihe ọmụmụ na-ele ihe na-akpali agụụ mmekọahụ site na iji ngwaọrụ gụnyere fMRI, MRI na EEG. Ha mekwara nchọpụta neuro-endocrine na ọmụmụ neuro-pyschological. A nabatara ibe a site Yourbrainonporn.com. Biko gaa na Yourbrainonporn.com ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe ọmụma gbasara nchọpụta ọhụrụ banyere mmetụta nke ikiri ihe gba ọtọ.
A na-atụle ihe omimi ọmụmụ ndị a n'okpuru ụzọ abụọ. Nke mbụ site na ụbụrụ ụbụrụ ahụ na-eri ahụ gbanwere ọ bụla kọọrọ. N'okpuru ebe a, edepụtara otu ọmụmụ ahụ site na ụbọchị e bipụtara ya, ya na nkọwa na nkọwa.
Ndepụta site na ụbụrụ na-eri ụbụrụ gbanwere: Ụbụrụ isi anọ dị iche iche na-agbanwe agbanwe site na ịṅụ ọgwụ ọjọọ George F. Koob na Nora D. Volkow na nlele anya ha. Koob bụ onye isi nke National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), na Volkow bụ onye nhazi nke National Institute on Drug Abuse (NIDA). E bipụtara ya na The New England Journal of Medicine: Ọganihu Na-ahụ Maka Ọrịa Na-ahụ Maka Ọrịa Na-ahụ Maka Ahụ Ike (2016). Akwụkwọ akụkọ ahụ na - akọwa mgbanwe ndị isi ụbụrụ na-emetụta ma ọgwụ ọjọọ na ịṅụ ọgwụ ọjọọ, mgbe ọ na - ekwu na paragraf mmeghe ya na mmekọahụ riri ahụ bụ:
"Anyị kwubiri na neuroscience na-aga n'ihu na-akwado ụdị ọrịa ụbụrụ nke ụbụrụ. Neuroscience nchọpụta na mpaghara a abụghị naanị na enye ohere ọhụụ maka igbochi na ọgwụgwọ ọgwụ iri na ahụ na-eri ahụ (dịka, nri, mmekọahụ, na ịgba chaa chaa) .... "
Akwụkwọ Volkow & Koob depụtara isi ihe riri isi anọ-kpatara ụbụrụ mgbanwe, nke bụ: 1) Mmetụta uche, 2) Enweghi ike, 3) Akụkụ na-aga n'ihu na-adịghị mma (hypofrontality), 4) Usoro nchekasị na-adịghị mma. Ihe niile 4 nke ụbụrụ ụbụrụ ndị a ka a chọpụtara n'etiti ọtụtụ nchọpụta na-adịghị na nyocha nke edepụtara na ibe a:
Nnyocha ndị a na-ede sensitization (cue-reactivity & cravings) na ndị na-egwu egwu / mmekọahụ riri ahụ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Nnyocha ndị a na-ede deensitization ma ọ bụ àgwà (nke na-akpata nkwụsị) na ndị na-egwu egwu mmekọahụ / mmekọahụ riri ahụ: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nchoputa akuko banyere oru ndi dara ogbenye.hypofrontality) ma ọ bụ gbanwere ọrụ mbụ na ndị na-egwu egwu / mmekọahụ riri ahụ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Nnyocha ndị na-egosi a usoro nrụgide dysfunctional na ndị na-egwu porn / mmekọahụ addicts: 1, 2, 3.
Ndepụta site na ụbọchị e bipụtara: Ndepụta na-esonụ na-agụnye ihe omumu ọmụmụ ọhụụ nile e bipụtara na ndị na-egwu egwu na ndị nwere mmekọahụ. Ọmụmụ ihe ọ bụla e depụtara n'okpuru ya bụ otu nkọwa ma ọ bụ edemede, ma gosipụta nke mgbanwe nke ụbụrụ 4 nke ụbụrụ na-ekwu banyere ihe ndị ọ chọpụtara na-akwado:
1) Nchọpụta Mbụ nke Ihe Ọjọọ Na Neuroanatomics nke Mmekọahụ Mmekọahụ (Miner et al., 2009)
[usoro ikuku na-arụ ọrụ na mbụ / ọrụ dara ogbenye] - ọmụmụ gbasara fMRI metụtara ndị na-eri mmekọahụ. Ọmụmụ ihe na-akọ banyere omume na-enweghị isi na ọrụ Go-NoGo na-eri ahụ mmekọahụ (ndị na-akwa iko) ma e jiri ya tụnyere ndị na-achịkwa ya. Nyocha nke ụbụrụ gosipụtara na ndị na-eri ahụ agụụ mmekọahụ ahazighị ihe ndị na-acha ọcha na-acha ọcha ma e jiri ya tụnyere njikwa. Ederede:
Na mgbakwunye na ihe ndekọ ndị ahụ dị n'elu, ndị ọrịa CSB gosipụtara na ọ dịchaghị mkpa imetụta omume omume, usoro Go-No Go.
Nsonaazụ na-egosikwa na ndị na-ahụ maka CSB gosipụtara na ọganihu dị elu nke dị elu karịa ala dị iche iche (MD) karịa njikwa. Ntụle mmekọrịta na-egosi njikọ dị ịrịba ama n'etiti arụmọrụ na-adịghị emetụta ihe na-adịghị mma na anisotrophy (FA) na MD, ma ọ dịghị mkpakọrịta nke nwere mpaghara dị elu karịa. Nyocha ndị yiri nke ahụ gosiri na enweghi mmekọrịta dị njọ n'etiti ọdịdị elu lobe MD na ihe ndekọ akparamàgwà mmekọahụ.
2) Esemokwu nke onwe onye na-ekwu banyere ihe ndị isi ọrụ na omume rụrụ arụ na onye ọrịa na obodo nke ụmụ nwoke (Reid et al, 2010)
[ọrụ dara ogbenye dara ogbenye] - Ihe edemede:
Ndị ọrịa na-achọ enyemaka maka omume mmekọrịta nwoke na nwanyị na-egosipụtakarị atụmatụ nke enweghị isi, nkwenye siri ike, mkpebi na-adịghị mma, adịghị ike na ụkpụrụ mmetụta uche, yana oke nchegbu na mmekọahụ. Fọdụ n'ime njirimara ndị a na-ahụkarị n'etiti ndị ọrịa na-ahụ maka usoro ọgwụgwọ na-emetụta ọrịa na-emetụta nrụrụ ndị isi. Ihe ndị a mere ka nchọpụta dị ugbu a dị iche iche dị n'etiti otu ndị ọrịa na-enwe mmekọahụ (n = 87) na ndị na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ha (n = 92) nke ụmụ nwoke na-eji Ndekọ Ego Omume nke Executive Function-Adult Version Hypersexual gosipụtara mmekọrịta dị mma. ya na ndekota zuru oke nke nsogbu ndi isi na otutu uzo nke BRIEF-A. Nchọpụta ndị a na-enye ihe akaebe mbido na-akwado nkwenye ahụ na enwere ike itinye aka na nrụrụ mmekọrịta nwoke na nwanyị.
3) Ikiri Foto Ndị Na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet: Mmekọahụ nke Arousal na Psychological-Symptoms of Psychiatric for Using Internet Sex Sites Imirikiri (Ọkọ et al., 2011)
[ọchịchọ na-achọsiwanye ike / nchịkwa na ọrụ dara ogbenye] - Otu edemede:
Nsonaazụ gosiri na nsogbu ndị mmadụ na-enwe na ndụ kwa ụbọchị na-atụle ihe gbasara agụụ mmekọahụ, oke nke mgbaàmà uche, na ọnụ ọgụgụ nke ihe gbasara mmekọahụ na-eji mgbe ị nọ na ebe nrụọrụ weebụ Intanet na ndụ kwa ụbọchị, mgbe oge ejiri na ebe nrụọrụ weebụ Intaneti (nkeji kwa ụbọchị) enyeghị aka na nkọwa nke ọdịiche na IATsex score. Anyị na-ahụ ụfọdụ ihe jikọrọ ha na ụbụrụ na ụbụrụ nke nwere ike inye aka na ntanetị nke telivishọn buru ibu na ndị a kọọrọ maka ndị mmadụ n'otu n'otu na-adabere na ụda.
4) Ihe nchịkọta foto na-akpali agụụ mmekọahụ na-arụ ọrụ na ịrụ ọrụ arụ ọrụ (Laier et al., 2013)
Ụfọdụ ndị na - akọ nsogbu n'oge na mgbe ha na - ejikọta Intanet, dị ka na - ehi ụra ma na - echezọ nhọpụta, nke na - ejikọta na nsonaazụ ndị na - adịghị mma. Otu usoro nwere ike iduga ụdị nsogbu a bụ na inwe mmekọahụ n'oge mmekọahụ n'Intanet nwere ike igbochi ikike nchekwa ọrụ (WM), nke mere ka a ghara ileghara ihe ọmụma gburugburu ebe obibi anya na ya mere mkpebi nkwụsị. Nsonaazụ gosiri ka njọ na WM na ọnọdụ foto na-akpali agụụ mmekọahụ nke ọrụ 4-azụ na-atụle na ọnọdụ foto atọ fọdụrụ. A na-atụle nchọpụta gbasara ịṅụ ahụike n'Internet n'ihi na nnwale nke WM site na njirimara metụtara ahụike bụ nke a maara nke ọma site na ụbụrụ.
5) Usoro nhazi nke mmekorita nwoke na nwanyi na-eme mkpebi na ime mkpebi na -Laier et al, 2013)
Ime mkpebi na-aka njọ mgbe foto ndị metụtara mmekọahụ jikọtara eriri kaadị na-adịghị mma ma e jiri ya tụnyere arụmọrụ mgbe e jikọtara foto ndị metụtara mmekọahụ na ihe ndị ahụ dị mma. Mmetụta inwe mmekọahụ na-edozi mmekọrịta dị n'etiti ọnọdụ ọrụ na ime mkpebi. Ọmụmụ ihe a mere ka o doo anya na agụụ mmekọahụ na-egbochi ime mkpebi, nke nwere ike ịkọwa ihe mere ụfọdụ ndị ji enwe mmetụta na-ezighị ezi na ọnọdụ nke ịntanetị.
6) Ịgba ụta nke Intanet: Ịhụ agụụ mmekọahụ mgbe ị na-ekiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ ma ọ bụghị ndị na-emekọ ihe na-emekọ ihe na-eme ka ọ dị iche (Laier et al, 2013)
Nsonaazụ na-egosi na ndị na-egosi agụụ mmekọahụ na agụụ na-egosi ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Intanet na-atụ anya ọchịchọ ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị na mbụ ọmụmụ ihe. Ọzọkwa, e gosipụtara na ndị na-eme ihe nkiri na-akpali agụụ mmekọahụ na-ekwu banyere agụụ mmekọahụ na agụụ na-agụsi agụụ ike na-apụta na ihe nkiri na-akpali agụụ mmekọahụ. N'ọmụmụ ihe abụọ ahụ, ọnụọgụgụ na njirimara na ndị mmekọ nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ na-ejikọtaghị ya na ịntanetị. Ihe ndị a na-akwado nkwenye mmeju ahụ, nke na-aghọ nkwado, usoro mmụta, na ịchọsi ike ịbụ usoro dị mkpa n'ime mmepe na ntanetị nke mmekọahụ riri ahụ. Mkparịta ụka na-adịghị mma ma ọ bụ ndị na-enweghị afọ ojuju nwere ike ghara ịkọwachasị mmekọahụ nke ịntanetị.
7) Ọchịchọ Mmekọahụ, ọ bụghị ịkwa iko, metụtara Mmezi Neurophysiological Ndị Mmekọahụ na-eweta (Steele et al., 2013)
[mmeghachi omume ka ukwuu nwere njikọ chiri na agụụ mmekọahụ: mmata na ịkpa agwa] - A gụle ọmụmụ EEG a na media dị ka ihe akaebe megide adị adị / mmekọahụ riri ahụ. Ọ bụghị otú ahụ. Steele et al. 2013 na-enye nkwado maka ịdị adị nke ịṅụ ọgwụ ọjọọ na porn na-achịkwa ịchịkwa ọchịchọ agụụ mmekọahụ. Kedu otu ọ bụ? Ọmụmụ ihe ahụ kọrọ ọkwa EEG dị elu (gbasara foto ndị na-anọghị na ya) mgbe a na-ekpughe foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'oge na-adịghị anya. Nnyocha na-egosi na P300 dị elu na-apụta mgbe ndị na-eri ahụ na-ekpughere anya (dị ka ihe oyiyi) metụtara ahụike ha.
Na akara na Mahadum Cambridge University na-enyocha ọmụmụ, nkuzi EEG a na-akọkwa akụkọ ka njọ na-eme ka agụụ mmekọahụ na-adịwanye njọ. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ - ndị mmadụ na ụbụrụ ụbụrụ ha na-eme ka ha nwee mmekọahụ ga-aka mma ka ha nwee mmekọahụ karịa ka ha na nwoke nwere ezigbo mmekọahụ. Na-awụ akpata oyi n'ahụ, ọnụ na-amụchite ọnụ Nicole Prause kwuru na ndị ọrụ porn nwere "akwa libido," ma ihe ọmụmụ ahụ na-ekwu ihe dị iche (ọchịchọ nke ndị ọchịchị na-achọ ịlụ nwoke na nwanyị na-etinye aka na njikọta ha na-eji egwu porn).
Zukọta abụọ a Steele et al. ihe nchoputa na egosi akwa ụbụrụ na-egosi ihe oyiyi (foto porn), ma ọ dịghị ihe mmeghachi omume na-akwụ ụgwọ (mmekọahụ na mmadụ). Ha abụọ bụ ihe e ji mara mmadụ ahụ. Ihe isii akwụkwọ a na-atụle ndị ọgbọ na-akọwa eziokwu ahụ: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hụkwa nke a nnukwu YBOP critique.
E wezụga na ọtụtụ akwụkwọ a na-ekwughị na pịa, ọ na-ewute na ọmụmụ ihe nke Prause's 2013 EGG agafere nyocha nke ndị ọgbọ, ebe ọ bụ na ọ tara ahụhụ na-ezighị ezi: 1). ndị dị iche iche (ụmụ nwoke, nwanyị, ndị na-abụghị nwoke na nwanyị); 2) emeghị ka ihe nyocha maka nsogbu uche ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ; 3) ọmụmụ nwere enweghị njikwa maka otu; 4) ajụjụ ndị ahụ emeghị ka ọ dị mma maka ịṅụ ọgwụ ma ọ bụ ịṅụ ọgwụ ọjọọ.
8) Njikọ ụbụrụ na Njikọ arụmọrụ nke ejikọtara na nri ndị na-akpali agụụ mmekọahụ: The Brain on Porn (Kuhn & Gallinat, 2014)
[desensitization, habituation, na dysfunctional prefrontal sekit]. Ihe ọmụmụ Max Planck Institute fMRI a na-akọ banyere nchọpụta nhụjuanya nke 3 na-emetụta ogo dị elu nke iji egwu egwu: (1) obere ụgwọ ọrụ usoro isi awọ (dorsal striatum), (2) obere ọrụ nkwụghachi ụgwọ ọrụ mgbe ị na-ele foto foto nwoke na nwanyị anya, (3) njikọ arụmọrụ dara ogbenye n'agbata azụ azụ azụ na cortex prefrontal. Ndị na-eme nchọpụta sụgharịrị ihe nchoputa 3 dị ka ihe na-egosi mmetụta nke ikpughe egwu ogologo oge. Ihe ọmụmụ ahụ kwuru,
Nke a kwekọtara n'echiche bụ na ikpughe ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na-ebute usoro iwu nke mmeghachi omume nke anụ ahụ na mmeghachi omume mmekọahụ..
N'ịkọwa njikọ Njikọ nke dara ogbenye n'etiti PFC na striatum ọmụmụ ahụ kwuru,
Akwụsịghị arụmọrụ nke sekit a metụtara njikọ nhọrọ omume na-ekwesịghị ekwesị, dịka ịchọrọ ọgwụ, n'agbanyeghị ihe nwere ike ịpụta
Onye na-edu akwụkwọ Simone Kühn na-ekwu okwu na nkwupụta mgbasa ozi Max Planck kwuru:
Anyị na-eche na isiokwu ndị na-eji oké egwu porn chọrọ mkpawanye ụba iji nweta ụgwọ ọrụ ahụ. Nke ahụ nwere ike ịpụta na ikiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ mgbe niile na-ebute usoro ịkwụ ụgwọ gị. Nke ahụ ga-adabara n'ụzọ zuru oke na-ekwu na usoro nkwụghachi ụgwọ ha kwesịrị inwe mmetụ na-eto eto.
9) Mmekọahụ na-eme ka ndị mmadụ nwee mmekọahụ na-enweghị ihe ọ bụla (Voon et al., 2014)
[sensitization / cue-reactivity and desensitization] Nke mbụ n’ime usoro nke ọmụmụ ihe ọmụmụ Mahadum Cambridge chọtara otu ụdị ọrụ ụbụrụ ahụ na ndị na-eri ahụ riri ahụ (isiokwu CSB) dị ka a hụrụ na ndị ọgwụ ọjọọ na ndị a alcoụrụma - nnukwu mmeghachi omume ma ọ bụ mmetuta. Onye ndu nyocha Valerie Voon kwuru, sị:
O doro anya na ndịrịta iche dị n'etiti ụbụrụ n'etiti ndị ọrịa nwere mmekọahụ na ndị ọrụ afọ ofufo siri ike. Esemokwu ndị a yiri ndị na-eri ọgwụ ọjọọ.
Voon et al., 2014 chọpụtakwara na ndị na-eri porn kwesịrị ekwesị ihe a nabatara riri ahụ ịchọrọ "ya" karịa, ma ọ gaghị amasị "ya" ọzọ. Ekeputara:
N'iji ya tụnyere ndị ọrụ afọ ofufo ahụike, isiokwu CSB nwere ọchịchọ mmekọahụ karịa nke onwe onye ma ọ bụ ịchọ ịchọta ihe doro anya ma nwekwuo ọnụ ọgụgụ dị mma iji mee ka ọ dị nro, si otú a gosipụta ọdịiche n'etiti ọchịchọ na mmasị
Ndị nchọpụta ahụ kwukwara na 60% nke isiokwu (nkezi afọ: 25) nwere ọhụụ nhụta mmemme ma ọ bụrụ na ya na ezigbo ndị mmekọ, ma enwere ike ịrụpụta ihe na porn. Nke a na-egosi ntọala ma ọ bụ omume. Ihe odide:
Akuko CSB kwuru na site n'iji oke ihe eji eme ihe banyere ihe ndi nwoke na nwanyi ......... .. enwere ike ime ka ozo di na nwunye ma obu ndi ozo (obu ezie na ha abughi nmekorita nke nwanyi).
Ihe ndị CSB jiri ya tụnyere ndị ọrụ afọ ofufo ahụike nwere nnukwu nsogbu karịa inwe agụụ mmekọahụ ma nwee ahụmahụ karịa nrụgide siri ike na mmekọrịta chiri anya kama ọ bụghị ihe gbasara mmekọahụ.
10) Nlekọta Anya N'ihe Na-egosi N'ihe E Ji Nyocha Esemokwu Na-enwe Mmekọahụ na Onye ọ bụla na na na -Mechelmans et al., 2014)
[sensitization / cue-reactivity] - Nke abụọ ọmụmụ Mahadum Cambridge. Otu okwu:
Ihe nchoputa nke nlebara anya nke oma ...................... kwere ka okwesiri imeghari uche na nleghari anya nke oma n'ile ihe omuma banyere ihe ojoo. Nchọpụta ndị a na-esonye na nchọpụta ndị na-adịbeghị anya nke mmeghachi omume na-adịghị ahụkebe na ntanetị ndị na-ahụ maka ọgwụ ọjọọ na inye ihe nkwado maka mkpali na-akpali akpali nke ịṅụ ọgwụ ọjọọ nke na-eme ka azịza na-adịghị mma dị na [ ịṅụ ọgwụ ọjọọ). Ihe omimi a na-achoputa na nchoputa anyi na nso nso a bu na e tinyere vidio di iche iche na mmekorita na ihe ndi ozo n'oru netiwu di ka nke ahuru n'ihe omumu ihe banyere mmuta. Enwekwu ọchịchọ ma ọ bụ ịchọrọ kama ịmasị ka ejikọtara ya na ọrụ na netwọk ahụ. Ihe ọmụmụ a nile na-enye nkwado maka edemede nke ịmalite ịṅụ ọgwụ ọjọọ na-akpali akpali nke na-egosi mmeghachi omume na-enweghị isi banyere ịkwa iko na CSB.
11) A pụrụ ịkọwa ihe ndị na-agụ agụụ mmekọahụ na Cybersex na ndị na-eme ihe nkiri na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị site na nkwupụta obi ụtọ (Laier et al, 2014)
[ọchịchọ ka ukwuu / sensitization] - Ihe edemede:
Anyị nyochara ụmụ nwanyị 51 IPU na ụmụ nwanyị 51 na-abụghị ndị na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n’Intanet (NIPU). N'iji akwukwo ajuju, anyi nyochara oke oke nke mmekorita nke mmekorita nke Intanet, tinyere ikike nke inwe mmekorita nke nwoke na nwanyi, mmekorita nke mmekorita nke nwoke na nwanyi, na oke ihe mgbaàmà nke uche. Tụkwasị na nke ahụ, e mere ihe ngosi nke nnwale, gụnyere ihe na-akpali agụụ mmekọahụ nke ihe osise 100, nakwa ihe ngosi nke agụụ. Nsonaazụ gosiri na IPU gosipụtara foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ dị ka ihe na-akpali akpali ma kọọrọ ha agụụ ka ukwuu n'ihi ihe ngosi ihe nkiri na-akpali agụụ mmekọahụ ma e jiri ya tụnyere NIPU.
Ọzọkwa, agụụ mmekọahụ, agụụ mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ, inwe mmetụta nke inwe mmekọahụ, nsogbu mmekọahụ, na oke mgbaàmà nke mmụọ na-ebu amụma banyere agụụ mmekọahụ nke ịntanetị na IPU. Nọ na mmekọrịta, ọnụ ọgụgụ nke ndị mmekọ nwoke na nwanyị, afọ ojuju na ndị mmekọ nwoke na nwanyị, na iji mmekọrịta ịntanetị ejikọtaghị na ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na ịntanetị. Nsonaazụ ndị a kwekọrọ na ndị a kọọrọ maka ụmụ nwoke nwoke na nwoke na nwanyị na ọmụmụ ihe gara aga. Achọpụta ihe banyere nhụsianya nke agụụ mmekọahụ, usoro nke mmụta, na ọrụ nke mmeghachi omume na agụụ na mmepe agụụ mmekọahụ nke ịntanetị na IPU kwesịrị ịtụle.
12) Ihe Nlereanya na Atụmatụ Ebumnuche banyere Ihe Ndị Na-eme Ka E Nwee Ịntanetị Ịṅụ Ahụhụ Site na Nlekọta Ịhụ Anya (Laier et al., 2014)
A na - atụle ọdịdị nke ihe a na - akpọkarị ịṅụ ọgwụ ọjọọ na Intanet (CA) na usoro mmepe ya. Ọrụ ndị gara aga na-enye echiche na ụfọdụ ndị nwere ike ịbụ ndị na-adighi ike na CA, ebe a na-ewere nkwenye siri ike na ntụgharị-reactivity dị ka usoro isi nke mmepe CA. Na ọmụmụ ihe a, ụmụ nwoke na-ahụ maka ụmụ nwoke 155 gosiri 100 foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ma gosipụta mmụba nke agụụ mmekọahụ. Ọzọkwa, ọchịchọ dị iche iche na-aga n'ihu CA, na-enwe mmetụta maka inwe mmasị na mmekọahụ, na-ejikwa mmekọahụ eme ihe n'ụzọ zuru ezu. Ihe ọmụmụ a na-egosi na e nwere ihe ndị na-adịghị mfe na CA ma nye ihe akaebe maka ọrụ nke mmeju agụụ mmekọahụ na nrụrụ aka na-egbochi mmepe nke ca.
13) Ihe ọhụrụ, Nlekọta na Ntị Ntị Maka Mmekọahụ Mmekọahụ (Banca et al, 2015)
[ọchịchọ ka ukwuu / sensitization na habituation / desensitization] - Ọmụmụ ihe ọzọ gbasara fMRI University nke Cambridge. E jiri ya tụnyere njide ndị na-eri agụụ mmekọahụ na-ahọrọ agụụ mmekọahụ na ọnọdụ dị mma metụtara porn. Otú ọ dị, ụbụrụ nke ndị na-a pornụ ọgwụ ọjọọ na-eme ngwa ngwa na-enwe mmekọahụ. Ebe ọ bụ na mmasị ọhụụ adịghị adị na mbụ, a kwenyere na ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na-akpali agụụ mmekọahụ na-achọ iji merie omume na deensitization.
Mmekọahụ na-agba aghara (CSB) jikọtara ya na mmelite kachasị mma maka inwe mmekọahụ, ma e jiri ya tụnyere ihe nchịkwa, na nchịkọta zuru oke maka ederede na-enwe mmekọahụ na ego na-ezighị ezi ma e jiri ya tụnyere ndị ọrụ afọ ofufo. Ndị CSB na-enwekwa ebe obibi dị iche iche na-ejikọta ọnụ ahịa na-eme ka ndị mmadụ nwee mmekọahụ na-ezighị ezi na ogo nke ịdị na-ejikọta ya na ọchịchọ dị mma maka ihe gbasara mmekọahụ. Akpasoro mmekorita ihu na-enwe mmekọahụ na-enweghị ike ịchọta site na mmasị dị iche iche jikọtara ya na nlezianya anya n'oge gbasara mmekọahụ. Ọmụmụ ihe a na-egosi na ndị CSB nwere ụdị mmasị na-enweghị atụ maka ụdị mmekọahụ ọ bụla nwere ike ịme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ndị mmadụ na-enwekwu àgwà ha na-eme ka ha nweta ụgwọ ọrụ.
Otu okwu site na ntọhapụ mgbasa ozi metụtara:
Ha chọpụtara na mgbe ndị na-ahụ maka mmekọahụ na-ele ụdị mmekọahụ ahụ anya ugboro ugboro, ma e jiri ya tụnyere ndị ọrụ afọ ofufo ahụike ahụ, ha nwere ọganihu dị ukwuu na mpaghara ụbụrụ nke a maara dịka ụbụrụ na-eme ka ọkpụkpụ azụ, nke a maara na ọ gụnyere itinye atụmanya na ịzaghachi ihe ọhụrụ. Nke a kwekọrọ na 'habituation', ebe onye ahụ na-eri ahụ na-achọpụta ihe mkpali ahụ na - adịghị akwụ ụgwọ - dịka ọmụmaatụ, onye na - aṅụ kọfị nwere ike ịnweta caffeine 'buzz' site na iko mbụ ha, ma ka oge na - aga, ha na - aṅụ kọfị, buzz na-aghọ.
Omuma omume omume a na-emetụta ụmụ nwoke na-ahụ ike nke a na-egosiputa otu vidiyo vidiyo ahụ. Ma mgbe ha na-ele vidiyo ọhụrụ, ọkwa nke mmasị na mkpali na-alaghachi na ọkwa mbụ. Nke a na-egosi na, iji gbochie ebe obibi, onye na-eri agụụ mmekọahụ ga-achọ ịchọpụta ihe oyiyi ọhụrụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ime omume nwere ike ịchụpụ ọchụchọ maka ihe ngosi ihe osise.
"Ihe ndị anyị chọpụtara dị mkpa karịsịa na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'ịntanetị," ka Dr. Voon na-agbakwụnye. "O doro anya ihe kpatara agụụ mmekọahụ na mbụ ma o yikarịrị ka ụfọdụ ndị na-enwe mmasị karịa ịṅụ ọgwụ ọjọọ karịa ndị ọzọ, ma ọhụụ yiri nke na-adịghị agwụ agwụ nke ihe oyiyi mmekọahụ ndị dị na ntanetị na-enyere aka na-eri nri riri ahụ, na-eme ka ọ bụrụkwuo ya. ọ na-esiri m ike ịgbapụ. "
14) Mkpụrụ obi na-adịghị mma nke agụụ mmekọahụ na ndị mmadụ nwere Nsogbu mmekọahụ na-akpata nsogbu (Seok & Sohn, 2015)
[mmeghachi omume njupụta / sensitization na ikuku sekit na-adịghị arụ ọrụ] - Nke a Korean Korean fMRI na-emegharị ụbụrụ ụbụrụ ndị ọzọ na ndị ọrụ porn. Dị ka ọmụmụ ihe ọmụmụ Mahadum Cambridge ọ hụrụ usoro mmegharị ụbụrụ nke na-emetụta ụbụrụ ndị nwere mmekọahụ, nke gosipụtara usoro nke ndị ọgwụ ọjọọ riri ahụ. N'ikwekọ n'ọtụtụ ọmụmụ German ọ hụrụ ngbanwe na cortex mbụ nke kwekọrọ na mgbanwe ndị ọgwụ ọjọọ riri ahụ. Ihe dị ọhụrụ bụ na nchoputa ahụ dabara na usoro mmezi nke cortex mbụ a hụrụ na ndị ọgwụ ọjọọ riri ahụ: Nnukwu mmeghachi omume na onyonyo mmekọahụ mana egbochitere nzaghachi nye nsogbu ndị ọzọ. Otu okwu:
Ọmụmụ ihe anyị na-eme iji nyochaa njikọta nke agụụ mmekọahụ na ihe osise nke magnetik resonance arụ ọrụ (fMRI). Mmadụ iri abụọ na atọ nwere oge PHB na 22-na-adabere na nlekọta ahụike ka a na-enyocha mgbe ha na-eleghara mmekorita nwoke na nwanyi anya. Ebumnuche nke agụụ mmekọahụ na-emetụta ihe ọ bụla gbasara mkpali mmekọahụ. N'ihe gbasara njikwa, ndị mmadụ na PHB nwere ọtụtụ agụụ na-agụkarị mgbe ha na-enwe mmekọahụ. A hụrụ nkwalite dị elu n'ime oghere caudate, lobe nke dị ala karịa, gyrus gingo, thalamus, na ụbụrụ nke mbụ na-ahụ maka akụkụ PHB karịa ndị na-achịkwa. Na mgbakwunye na, usoro hemodynamic na mpaghara arụ ọrụ dị iche n'etiti otu. N'ikwekọ na nchoputa nke ụbụrụ na nyocha nke ihe na-eri ahụ na ịṅụ ọgwụ ọjọọ, ndị nwere àgwà omume nke PHB na ọchịchọ nwere mmelite gosipụtara mmeghasị gbanwere na nchịkwa mbụ na mpaghara ndị dị ala
15) Mgbanwe nke Ọganihu Na-adịgide Adịgide site na Mmekọahụ Mmemme na Ndị Ọrụ na Njikwa Ejighị Ekwenye na "Porn Porno" (Mee et al., 2015)
[habituation] - Nke abụọ EEG ọmụmụ si Nicole Prause si otu. Ọmụmụ ihe a jiri nyocha 2013 tụnyere Steele et al,, 2013 na otu njikwa otu (ma ọ na-ata ahụhụ site na otu usoro nzibi nke edepụtara aha n'elu). Nsonaazụ: E jiri ya tụnyere njikwa "ndị ọ bụla na-enwe nsogbu na-achịkwa ntancha egwu ha" nwere nzaghachi ụbụrụ na-apụta ìhè na nke abụọ na foto nke vanilla porn. Na onye ndu akwukwo azọrọ ihe ndị a "ịṅụ ọgwụ ọjọọ na-akpata mmekọahụ." Onye ọkà mmụta sayensị ziri ezi ga-ekwu na nyocha ha na-emeghị ihe ọ bụla emeelarị usoro nke ọmụmụ ihe?
N'eziokwu, ihe ndị ọ chọpụtara Mee et al. 2015 kwadoro n'ụzọ zuru oke na Kpọọ & Gallinat (2014), nke choputara na enwere ihe ozo na-ejikọta ya na obere ntinye aka n'ikike na nzaghachi nke foto vanilla. Mee et al. Nchoputa na ndokwa ya Banca et al. 2015 nke bụ #13 na ndepụta a. Ọzọkwa, nnyocha ọzọ EEG achọpụta na ị na-ejikarị egwu egwu egwu na ụmụ nwanyị na-ejikọ ụbụrụ na-enweghị ụbụrụ na egwu. Ngụgụ EEG dị ala pụtara na ndị na-achị achị anaghị etinye uche na foto ndị a. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, a na-eleghara ndị na-egwu egwu egwu na-ese onyinyo vanilla porn. Ha gwụ ha ike (habituated or desensitized). Lee ihe a nnukwu YBOP critique. Akwụkwọ asaa a tụlere na ndị nkuzi kwetara na nchọpụta a na-achọta ihe nkwụsịtụ / habituation na ndị na-egwu egwu ugboro ugboro (nke na-adaba n'ihe riri ahụ): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
16) HPA Axis Dysregulation na Ụmụ nwoke na Nsogbu Mbụ (Chatzittofis, 2015)
[nkwụsịtụ nrụgide na-adịghị arụ ọrụ] - Ọmụmụ ihe na 67 nwoke na nwanyị na-eri ahụ riri ahụ na njikwa afọ 39. Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) bụ ihe kachasị mkpa na nzaghachi nrụgide anyị. Ihe riri ahụ gbanwee ihe mgbagwoju anya nke ụbụrụ na-eduga na oghere HPA dysfunctional. Ọmụmụ ihe a banyere ndị na-eri agụụ mmekọahụ (ndị na-edina ụdị onwe ha) chọpụtara mgbanwe ntụgharị ngbanwe nke yiri ihe ndị ahụ na-eri ahụ. Ihe si na ntọhapụ pịa:
Ọmụmụ ihe ahụ gụnyere ụmụ nwoke 67 na nsogbu nsogbu ọbara na 39. Ejiri nlezianya chọpụta ndị ahụ sonyere maka nsogbu hypersexual na nsogbu ọ bụla na ịda mbà n'obi ma ọ bụ nsogbu ụmụaka. Ndị na-eme nchọpụta nyere ha obere dose dexamethasone na mgbede tupu ule ahụ emee ka ha ghara iweghasị nsogbu ahụike, ma n'ụtụtụ weere ọnọdụ ha nke hormones cortisol na ACTH. Ha chọpụtara na ndị ọrịa na-enwe mmekọahụ hypersexual nwere ọtụtụ homonụ dị otú ahụ karịa njikwa ahụ ike, ihe dị iche na-adịgide ọbụna mgbe ịchịkwa maka ịda mbà n'obi na nsogbu nwatakịrị.
"A chọpụtalarị usoro iwu nrụgide na ndị ọrịa dara mbà n'obi na ndị na-egbu onwe ha na ndị na-emegbu mmadụ," ka Prọfesọ Jokinen na-ekwu. "N'afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-elekwasị anya ma nwatakịrị na-eto eto nwere ike iduga usoro nrụgide ahụ nke a na-akpọ epigenetic usoro, na okwu ndị ọzọ otú ọnọdụ psychosocial ha nwere ike isi metụta mkpụrụ ndụ ndị na-achịkwa usoro ndị a." ndị na-eme nchọpụta, ihe ndị ahụ na-egosi na otu usoro mmebi ahụ na-emetụta ụdị mmegbu ọzọ nwere ike itinye aka na ndị nwere nsogbu hypersexual.
17) Nchịkwa na-achịkwa na ịntanetị: usoro ihe atụ na nyochaa nke neuropsychological na nchọpụta nyocha (Ọkọ et al, 2015)
[dysfunctional prefrontal circuits / poorer Executive function and sensitization] - Ntughari:
N'ikwekọ na nke a, nsonaazụ site na neuroimaging na-arụ ọrụ na nyocha ndị ọzọ na-ahụ maka nyocha na-egosi na mmeghachi omume, agụụ, na ịme mkpebi bụ echiche dị mkpa iji ghọta ị addictionụ Intanet. Ihe nchoputa banyere nbelata na nchịkwa isi kwekọrọ na omume riri ahụ ọzọ, dị ka ịgba chaa chaa. Ha na-ekwusi ike na nhazi nke ihe a dika ihe riri ahu, n'ihi na otutu uzo di na ihe ndi ozo. Ọzọkwa, nsonaazụ nke ọmụmụ ihe ugbu a dị ka nchọpụta sitere na nchọpụta ịdabere na ngwa ngwa ma mesie myirịta dị n'etiti ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na ịntanetị na ịexụ ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ omume riri ahụ ndị ọzọ.
18) Mkpakọrịta zuru oke na-eri agụụ mmekọahụ na Intanet: Nwepụta nke Mkpokọta Mmekọrịta na foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ (Snagkowski et al, 2015)
[agụụ ka ukwuu / sensitization] - Ntughari:
Nnyocha ndị e mere n'oge na-adịbeghị anya na-egosi myirịta dị n'etiti ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na ịntanetị na ihe ndị na-adabere na ya ma na-arụ ụka iji kọwaa ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na ịntanetị dị ka omume riri ahụ. N'ịdabere na ngwongwo, mkpakọrịta doro anya maara na ha ga-arụ ọrụ dị oke mkpa, yana mkpakọrịta ndị dị otú ahụ adịghị amụ ihe na ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na ịntanetị, ruo ugbu a. N'ime nnyocha ọmụmụ a, ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na ụmụ nwoke iri na asatọ mechara nyocha Ule zuru ezu (IAT; Greenwald, McGhee, & Schwartz, 128) jiri foto ndị gba ọtọ. Ọzọkwa, omume mmekọahụ na-enye nsogbu, inwe mmetụta maka agụụ mmekọahụ, ọchịchọ nke ị towardsụ ọgwụ ọjọọ na ịntanetị, na agụụ mmekọahụ n'ihi ikiri foto ndị gba ọtọ ka enyochare.
Nsonaazụ gosipụtara mmekọrịta dị mma n'etiti mkpakọrịta zuru oke nke foto foto ndị gba ọtọ nwere mmetụta dị mma na ọchịchọ maka omume riri ahụ cyberex, omume mmekọahụ nwere nsogbu, mmetụta uche na-akpali agụụ mmekọahụ yana agụụ mmekọahụ. Ọzọkwa, nyocha mkparịta ụka na-agba agba kpughere na ndị mmadụ kọrọ oke agụụ inwe mmụọ ma gosipụta mkpakọrịta zuru oke nke foto foto ndị gba ọtọ nwere mmetụta dị mma, ọkachasị na-emetụta ihe riri ahụ. Nchoputa a gosiputara uzo kwesiri inwe ezigbo nmekorita ya na ezigbo ihe osise na ihe nlere-anya nke ihe ndi mmadu. Ọzọkwa, nsonaazụ nke ọmụmụ ugbu a bụ ihe a na-achọta na nchoputa sitere na nyocha ihe metụtara inyocha ma mesie ike na njiri mara nke ihe riri ahụ na ntanetị ọgwụ na ihe ndị ọzọ.
19) A pụrụ ijikọta mgbaàmà nke ịṅụ ọgwụ ọjọọ na ịntanetị na ma na-abata ma na-ezere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ: ihe si na ihe nrịta anya nke ndị na -Snagkowski, et al., 2015)
Ụzọ ụfọdụ na-ezo aka n'omume ka ha na-adabere na ihe ndị na-adabere na ụda nke usoro nlezianya / izere bụ usoro dị mkpa. Ọtụtụ ndị nchọpụta ekwuola na n'ime ọnọdụ ikpebi metụtara ahụike, ndị mmadụ nwere ike igosi na ha nwere ike ịbịaru ma ọ bụ zere nsogbu ndị metụtara ahụike. N'ime ihe ọmụmụ 123 ugbu a, ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na - emezigharị ihe-Avoidance-Task (AAT; Rinck na Becker, 2007) gbakwunyere na foto ndị gba ọtọ. N'oge ndị a na-akpọ AAT ma ọ bụ na ha ga-agbanye ihe nkiri na-akpali agụụ mmekọahụ ma ọ bụ dọpụta ha n'ebe ha nọ site na ọṅụ. Mmetụta uche maka agụụ mmekọahụ, nsogbu mmekọahụ na-enye nsogbu, na ọchịchọ nke ịṅụ ọgwụ ọjọọ na ịntanetị ka a na-enyocha ajụjụ.
Nsonaazụ gosiri na ndị nwere ọchịchọ ime ihe ike na ịntanetị na-eche ma ọ bụ zere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Tụkwasị na nke ahụ, nchịkọta nchịkwa nke nchịkwa gosipụtara na ndị mmadụ nwere nnukwu agụụ mmekọahụ na nsogbu mmekọahụ nke gosipụtara àgwà ndị dị elu / izere omume, kọọrọ mgbaàmà dị elu nke ịṅụbiga ahụ ike nke ịntanetị. N'ihe dị iche iche na-adabere n'ihe ndị dị na ya, nsonaazụ na-egosi na ịbịaru nso na izere ọchịchọ pụrụ itinye aka na mmekọahụ nke Intanet. Ọzọkwa, inwe mmekọrịta na inwe mmetụta nke inwe mmekọahụ na nsogbu nke inwe mmekọahụ nwere ike imetụta ụba nke mkpesa onwe onye na ndụ kwa ụbọchị n'ihi na ịntanetị na-eji ya eme ihe. Nchọpụta ahụ na-enye ihe akaebe ndị ọzọ na-egosi maka ọdịiche dị n'etiti ịṅụ ọgwụ ọjọọ na ịntanetị. A na-eweghachi ihe yiri nke ahụ na ntanetị nke igwe-ịntanetị na ọgwụ ndị metụtara ọgwụ.
20) Ịrapagidesi ike na foto ndị gba ọtọ? Ịgbaghasị ma ọ bụ ileghara ihe ndị na-egosi na ịntanetị na ọnọdụ dịgasị iche iche metụtara ihe mgbaàmà nke ịṅụbiga ahụ ike nke ịntanetị (Schiebener et al., 2015)
[ọchịchọ ka ukwuu / sensitization na ogbenye njikwa njikwa] - Ntughari:
Ụfọdụ ndị na-eji ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ eme ihe, dị ka ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, n'ụzọ na-eri ahụ, nke na-eduga ná nsogbu ndị siri ike na ndụ ma ọ bụ ọrụ. Otu usoro nke na-eduga ná nkwụsị dị njọ nwere ike belata ike ịchịkwa cognition na omume ndị nwere ike ịdị mkpa iji chọpụta mgbanwe mgbakwasị ụkwụ n'etiti ịntanetị na ọrụ ndị ọzọ na ọrụ nke ndụ. Iji lelee akụkụ a, anyị nyochara 104 ụmụ nwoke na-esonyere otu ihe nlekọta ndị isi na-ejikọta ihe abụọ: Otu setịpụrụ nwere foto nke mmadụ, nke ọzọ setịpụrụ foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Na ha abụọ na-edozi foto a ga-ekewa dịka ụfọdụ nhazi. Ihe mgbaru ọsọ doro anya bụ iji rụọ ọrụ niile na-arụ ọrụ na nha nha anya, site na ịgbanwu n'etiti nhazi na ọrụ nhazi na usoro ziri ezi.
Anyị chọpụtara na arụmọrụ na-erughị nhata na ihe atụ a dị iche iche jikọtara ya na ọnọdụ dị elu nke ịṅụ ọgwụ ọjọọ na ịntanetị. Ndị mmadụ na-emekarị ihe a ma ọ bụ na-eleghara anya na-arụ ọrụ na foto ndị gba ọtọ. Nsonaazụ na-egosi na ịbelata ikike ịchịkwa arụmọrụ dị ukwuu, mgbe ị na-ahụ ihe na-akpali agụụ mmekọahụ, nwere ike itinye aka n'àgwà arụmọrụ na nhụsianya na-esi na mmekorita nke ịntanetị. Otú ọ dị, ndị ọ bụla nwere ọchịchọ ịṅụ ọgwụ ọjọọ na ịntanetị yiri ka ọ bụ ọchịchọ ịhapụ ma ọ bụ ịbịakwute ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, dịka a tụlere n'ime ụdị ejiji ahụ.
21) Nzụkọ ahịa n'oge na-adịghị anya maka ihe ụtọ ugbu a: Ikiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na igbu oge (Discounting)Negash et al., 2015)
[nchịkwa dara ogbenye: nchọpụta kpatara] - Ihe odide:
Ọmụmụ ihe 1: Ndị sonyere na foto ndị gba ọtọ jiri ajụjụ ọnụ na ọrụ ịkwụsịlata oge na Oge 1 wee ọzọ izu anọ ka emechara. Ndị sonyere na-akọ ihe nkiri ikiri ihe izizi dị elu gosipụtara ọnụego mbelata oge dị elu na Oge 2, na-achịkwa maka ịkwụsị ịkwụsị oge mbụ. Ọmụmụ ihe 2: Ndị sonyere na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-egosipụta mbelata oge dị ntakịrị karịa ndị sonyere na nri ha kachasị amasị ha.
Igwe ihe na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet bụ ụgwọ ọrụ mmekọahụ nke na-enye aka na-egbu egbu oge dị iche iche karịa ụgwọ ọrụ ndị ọzọ, ọbụna ma ọ bụrụ na iji ya emeghị ihe ike ma ọ bụ na-eri ahụ. Nchọpụta a na-eme ka onyinye dị mkpa, na-egosi na mmetụta ahụ karịrị mkpali oge.
Ihe oriri na-akpali agụụ mmekọahụ nwere ike ime ka agụụ mmekọahụ nwee mmekọahụ ozugbo, ma enwere ike inwe mmetụta nke gafere ma metụta akụkụ ndị ọzọ nke ndụ mmadụ, karịsịa mmekọrịta.
Nchọta a na-enye echiche na ịntanetị bụ ụgwọ ọrụ mmekọahụ nke na-eme ka ị ghara ịkwụsị ụgwọ dị iche iche karịa ụgwọ ọrụ ndị ọzọ. Ya mere, ọ dị mkpa ka ị na-ekiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ ka ọ bụrụ ihe mkpali pụrụ iche na nkwụghachi ụgwọ, impulsivity, na ịṅụ ọgwụ ọjọọ na itinye ya n'ọrụ dị ka onye ọ bụla nakwa yana ọgwụgwọ.
22) Mmekọahụ na Mmekọahụ na-adabere na-ekpebi ikpebi agụụ mmekọahụ na Intanet na Homosexual Males (Laier et al., 2015)
Ihe nchoputa emere gosiputara nmekorita nke CyberSex riri riri nne (CA) na ihe ngosiputa nke nmekorita nwoke na nwanyi, na nnagide site na mmekorita nke omume nke ndi mmadu mere ka ha ghara idi ire. Ebumnuche nke ihe omumu a bu inyocha nnwale a. Ajuju ajuputara ihe omuma nke CA, mmetuta ya n’inwe agụụ mmekọahụ, ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na-eji ihe mkpali, akparamagwa mmekọahụ na-enye nsogbu, akara ngosi mmụọ, na akparamagwa mmekọahụ na ndụ n'ezie na ntanetị. Ọzọkwa, ndị bịaranụ kiriri vidiyo ndị gba ọtọ ma gosipụta agụụ mmekọahụ ha tupu ngosipụta vidio ahụ na mgbe ọ gasịrị.
Nsonaazụ gosipụtara mmekọrịta siri ike n'etiti mgbaàmà CA na ndị na-egosi agụụ mmekọahụ na ikewapụ mmekọahụ, ịnagide omume mmekọahụ, na mgbaàmà mmụọ. A jikọghị CA na omume mmekọahụ dị n'ịntanetị na kwa izu iji cybersex kwa oge. Nagide omume mmekọahụ na-eme ka mmekọrịta dị n'etiti nwoke na nwanyị inwe mmekọahụ na CA. Nsonaazụ ndi a gosipụtara maka ndị akọwara maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nwoke na nwanyị na ọmụmụ ihe ndị gara aga, a na-atụle ya megide nzụlite echiche echiche nke CA, nke na-egosipụta ọrụ nke nkwalite dị mma na nke na-adịghị mma n'ihi ojiji cybersex.
23) Ọrụ nke Neuroinflammation na Pathophysiology nke Hypersexual Disorder (Jokinen et al, 2016)
[nkwụsịtụ nrụgide na-adịghị mma na neuro-mbufụt] - Ọmụmụ ihe a kọrọ ọkwa dị elu nke na-ekesa Tumor Necrosis Factor (TNF) na ndị na-eri agụụ mmekọahụ ma e jiri ya tụnyere njikwa ahụ ike. Achọpụtakwala ọkwa TNF dị elu (ihe nrịba nke mbufụt) na ndị na-eme ihe ike na ndị ọgwụ ọjọọ riri ahụ (mmanya, heroin, meth). Enwere mmekọrịta siri ike n'etiti ọkwa TNF na akara nha atụ na-atụle ịkwa iko.
24) Àgwà Ọjọọ Mmebi: Ibu Ụzọ Mbụ na Limbic na Mmekọrịta (Schmidt et al., 2016)
[usoro ikuku na-adịghị arụ ọrụ na ntanetị] - Nke a bụ ihe ọmụmụ fMRI. N'iji ya tụnyere njikwa CSB na-achịkwa ahụ ike (ndị na-a pornụ ọgwụ ọjọọ) amụbawo olu amygdala aka ekpe ma belata njikọta arụmọrụ n'etiti amygdala na cortex prefrontal dorsolateral nke DLPFC. Mbelata njikọta arụmọrụ n'etiti amygdala na cortex prefrontal kwekọrọ na ọgwụ ahụ riri ahụ. A na-eche na njikọta dara ogbenye na-ebelata ikike cortex prefrontal na-achịkwa mkpali nke onye ọrụ itinye aka na omume ahụ riri ahụ.
Ọmụmụ ihe a na-egosi na ị toxicụ ọgwụ ọjọọ nwere ike ibute obere isi awọ ma si otú a belata olu amygdala na ndị ọgwụ ọjọọ riri ahụ. Amygdala na-arụsi ọrụ ike mgbe ọ na-ele egwu egwu, karịsịa n'oge ọhụụ mbụ na njide mmekọahụ. O nwere ike ịbụ na ị na-ahụkarị agụụ mmekọahụ na ịchọ ihe na ịchọ ihe pụrụ iche na amygdala na ndị na-egwu egwu egwu. N'aka nke ọzọ, afọ iri riri ahụ nke porn na nsonaazụ ọjọọ dị njọ - na cNchekasị nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-emetụta ụda olu amygdala. Nyocha #16 n'elu chọpụtara na "ụmụ nwanyị na-eri ahụ" na-enwe usoro nchekasị. Ogwu ojoo na-achoghi aka na mmekorita nwoke na nwanyi, tinyere ihe ndi na-eme ka nwoke na nwanyi di iche iche, na ebute olu di amygdala? Otu okwu:
Nchọpụta anyị dị ugbu a na-egosi mpịakọta dị elu na mpaghara nke metụtara nzụta na-akpali akpali na njikọta izu ike nke izu ike nke ntanetị na-achịkwa usoro nchịkwa mbụ. Mmebi nke netwọkụ ndị a nwere ike ịkọwa ụdị akparamaagwa nke akparamagwa na-akwụ ụgwọ gburugburu ebe obibi ma ọ bụ mmeghachi omume na-arụ ọrụ na-akpali akpali. Ọ bụ ezie na nchọpụta anyị na-achọpụta ọtụtụ na nke dị na SUD, nchọpụta ndị a nwere ike igosi ọdịiche dị ka ọrụ nke mmetụta neurotoxic nke ikpughe ọgwụ na-adịghị ala ala. Ihe akaebe na-apụta na-egosi na enwere ike ịmịpụ usoro ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na-akwado nkwado na-akpali akpali.
Anyị egosila na ọrụ na ntanetị a na-emeziwanye ka ọ bụrụ ihe ngosi dị oke mkpa ma ọ bụ na-egosi nkọwa doro anya nke mmekọahụ [Brand et al., 2016; Seok na Sohn, 2015; Voon et al., 2014] tinyere nlebara anya nke uche [Mechelmans et al., 2014] na ọchịchọ a kapịrị ọnụ maka ịkwa iko kama ọ bụghị ọchịchọ agụụ mmekọahụ n'ozuzu [Brand et al., 2016; Voon et al., 2014]. A na-ejikarị nlezianya elebara anya n'amaokwu ndị metụtara mmasị nwoke na nwanyị na-enwe mmasị na inwe mmekọahụ, nke mere ka ha kwenye na mmekọrịta dị n'etiti inwe mmekọahụ na nlekọta anya (Banca et al., 2016].
Nchọpụta ndị a nke arụ ọrụ emelitere metụtara ihe metụtara ọnọdụ mmekọahụ dị iche na nke nsonaazụ (ma ọ bụ ihe mkpali na-enweghị atụ) nke nwere nkwalite omume, ikekwe kwekọrọ na echiche nke ndidi, na-eme ka mmasị maka mmekorita nke mmekọahụ [Banca et al., 2016]. Nchịkọta nchọpụta ndị a na-enyere aka mee ka ọnyá na-adịghị ahụkebe nke CSB na-eduga n'inwe nghọta dị ukwuu banyere ọrịa ahụ na njirimara nke ihe nrịbama ọgwụgwọ.
25) Ihe na-emepụta ihe na-eme ka a na-ekiri ihe nkiri na-akpali agụụ mmekọahụ na -Ọkọ et al, 2016)
[mmeghachi omume ka ukwuu / sensitization] - Ọmụmụ German fMRI. Chọta # 1: Ọrụ nkwụghachi ụgwọ ụgwọ (ventral striatum) dị elu maka ịhọrọ foto ndị gba ọtọ. #Chọta # 2: Ventral striatum mmeghachi omume jikọtara ya na ịntanetị ị addictionụ ọgwụ ọjọọ. Ihe nchoputa abuo gosiputara ihe omuma ma kwekorita ụdị ahụ riri ahụ. Ndị na-ede akwụkwọ na-ekwu na "Nkọwa na-adabere na Ntanetị na-eri ahụ na-emetụta ndị ọzọ na-eri ahụ." Otu okwu:
Otu ụdị ụdị riri ahụ n'Internet bụ ihe oriri na-akpali agụụ mmekọahụ na-abawanye, nke a na-akpọkwa ịntanetị ma ọ bụ ịntanetị riri ahụ. Nchọpụta ọmụmụ na-achọpụta ihe na-eme ka ndị mmadụ na-ahụ ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ma e jiri ya tụnyere ihe ndị metụtara mmekọahụ / ihe ndị na-adịghị mma. Ugbu a, anyị kwetara na ventral striatum kwesịrị imeghachi omume iji hụ foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ma e jiri ya tụnyere foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-enweghị mmasị ma na arụ ọrụ ventral striatum dị iche na nke a ga-ejikọta ya na mgbaàmà nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Intanet. Anyị na-amụ 19 ndị nwoke na ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na-ese onyinyo ihe osise gụnyere ọdịnaya na-akpali agụụ mmekọahụ.
Foto ndị si na ụdị kachasị mma dị ka ihe na-adọrọ adọrọ, na-adighi adọrọ mmasị, ma na-adịkwu mma. Nzaghachi nke striatum na-esiwanye ike maka ọnọdụ dị mma ma e jiri ya tụnyere foto ndị a na-achọghị. A na-ejikọta ihe ndị a na-eme iji mee ihe na-egosi na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet. Ihe nrịta nke ihe omuma a bu kwa onye puru iche ihe omuma na nyocha nke nchikota ya na nzaghachi nke olu nke striatum dika ihe di iche na ihe omuma nke ihe omimi nke ntaneti Intanet, nmekorita nke nwoke na nwanyi, mmekorita nwoke na nwanyi, obi nkoropu, onye uche, na mmekorita nwoke na nwanyi . Nsonaazụ ahụ na-akwado ọrụ maka ventral striatum na nhazi nkwụghachi ụgwọ nhazi na afọ ojuju jikọtara ya na ihe gbasara ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Ntubere maka atụmanya ego na ventral striatum nwere ike inye aka na nkọwa nkowa nke ihe mere ndị mmadụ ji enwe mmasị na ịchọrọ agụụ mmekọahụ na-enwe ihe ize ndụ maka inwe ike ijide ihe oriri Intanet.
26) Mmetụta na-eme ka a gbanwee obi na Mmekọrịta Na-adịghị Mkpa na Ndị Na-enwe Mmekọahụ Mmejọ (Klucken et al., 2016)
[mmeghachi omume njupụta / sensitization na sekit na sekit na-adịghị arụ ọrụ] - Ihe ọmụmụ German fMRI a mere ihe abụọ kachasị site na Voon et al., 2014 na Kuhn & Gallinat 2014. Isi Nchoputa: A gbanwere njikọ ndị na-eme ka agụụ na-arụ ọrụ na njikọ ntanetị na CSB. Dị ka ndị na-eme nchọpụta si kwuo, mgbanwe mbụ - eme ka amygdala dị elu - nwere ike igosipụta mmezi nkwalite (nnukwu "wiring" na akara ndị na-anọghị na mbụ na-ebu amụma foto porn).
Mgbanwe nke abụọ - njikọta njikọta n'etiti ventral striatum na cortex prefrontal - nwere ike bụrụ akara maka ikike na-adịghị ike nke ịchịkwa mkpali. Ndị nnyocha ahụ kwuru, sị, “Mgbanwe ndị a] kwekọrọ n'ọmụmụ ihe ndị ọzọ na-enyocha njikọ nke nsogbu nke ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na enweghị mkpali nchịkwa.” Ihe nchoputa nke amygdalar kachasi ike (sensitization) ma belata njikọta n'etiti ụlọ ọrụ akwụ ụgwọ na preteal cortex (hypofrontality) bụ abụọ n'ime ụbụrụ ụbụrụ buru ibu nke a hụrụ na ọgwụ ọjọọ riri ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, 3 nke ndị 20 ndị na-egwu egwu egwu na-ata ahụhụ site na "ọrịa orgasmic-erection." Otu ihe:
N'ozuzu, ọrụ ahụ amygdala ahụ mepụtara wee na-eme ka ọnụ ọgụgụ nke ventral na-adabere na ya-PFC njikọ na-enye ohere maka nkọwa banyere etiology na ọgwụgwọ nke CSB. Ndị CSB nwere okwu yiri ka ọ na-adịkarị mfe ịmepụta mkpakọrịta n'etiti etiti na-anọghị na-anọpụ iche ma na-emetụta ahụike gburugburu ebe obibi. Ya mere, isiokwu ndị a nwere ike ịchọta ihe ndị na-eme ka mmadụ nwee mmekọahụ. Ma nke a na-eduga na CSB ma ọ bụ ihe sitere na CSB aghaghị ịza ya site na nyocha n'ọdịnihu. Tụkwasị na nke ahụ, usoro iwu na-adịghị mma, bụ nke gosipụtara na nkwonkwo ventral striatal-prefrontal, nwere ike ịkwado nkwado nke nrụrụ nsogbu ahụ.
27) Mgbaghara na-ezighi ezi n'iji ọgwụ ọjọọ eme ihe na ịṅụ ọgwụ ọjọọ (Banca et al., 2016)
[mmeghachi omume / mmetụta dị ukwuu karị, nzaghachi nkwalite dị elu] - Ọmụmụ ihe fMRI nke Cambridge University na-atụle akụkụ nke compulsivity na ndị aholicụrụma, ndị na-eri binge, ndị egwuregwu egwuregwu vidio na ndị na-eri ahụ riri ahụ (CSB). Ederede:
N'adịghị ka nsogbu ndị ọzọ, CSB jiri ya tụnyere HV gosipụtara nnweta ngwa ngwa iji nweta ụgwọ ọrụ ya na nkwụsi ike dị ukwuu na nkwụghachi ụgwọ ọnọdụ n'agbanyeghị na ọ rụpụtara. Ihe ndị CSB ahụ ekwughị ihe ọ bụla na-adịghị mma na nhazi ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe. Ihe nchọpụta ndị a na-emeghata na nchọpụta anyị mere n'oge gara aga maka mmelite dị mma maka nsogbu ndị na-akpata ma ọ bụ mmekorita ma ọ bụ ego, n'ozuzu ha na-atụ aro ịmalite imeziwanye ụgwọ ọrụ (Banca et al., 2016). A na-egosiputa ihe omumu omumu ndi ozo site na iji ugwo olu
28) Ịchọsi ihe ike na-akpali agụụ mmekọahụ maka ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na nkuzi na-emekọ ihe ọnụSnagkowski et al., 2016)
[mmeghachi omume / mmetụta dị ukwuu karị, mmeghachi omume bara ụba] - Ọmụmụ ihe a pụrụ iche mere ka ndị mmadụ nwee isiokwu ndị na-anọghị na mbụ, nke buru amụma ọdịdị nke foto ndị gba ọtọ. Ederede:
Enweghi otutu mmadu kwenyere banyere ihe nyocha nke ime ihe ojoo nke cybersex. Ụfọdụ na-abịakwute ịnye ihe yiri nke ahụ na ihe ndị na-adabere na ụbụrụ, n'ihi na nchịkọta ndị enyi bụ usoro dị oké mkpa. N'ime nnyocha a, ụmụ nwoke nwoke na ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-ebipụta Standard Pavlovian ka ha nwee ike ịgbanye ihe na-akpali agụụ mmekọahụ. Tụkwasị na nke ahụ, a na-enyocha ọchịchọ nke isi site na ikiri foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ọchịchọ nke ịṅụ ọgwụ ọjọọ na ịntanetị. Nsonaazụ gosipụtara mmetụta nke inwe mmasị nke onwe onye na ọchịchọ nke ịṅụbiga ahụ ike nke ịntanetị, nke na-eduzi site n'ịmụ ihe.
Na mkpokọta, nchoputa ndị a na-arụtụ aka maka ọrụ dị mkpa nke mmụta mmekọrịta maka mmepe nke ihe riri ahụ cybersex, ebe ha na-enyekwu akara akaebe maka myirịta dị n'etiti ọgwụ na ihe riri ahụ. Na nchịkọta, nsonaazụ nke ọmụmụ ugbu a na-egosi na ịmụkọ ihe ọnụ nwere ike ịrụ ọrụ dị mkpa gbasara mmepe nke ihe riri ahụ cybersex. Ihe nchoputa anyi n’egosi ihe akaebe banyere ihe odi n’etiti ihe riri udiri na ihe ndi mmadu ma obu ihe ntukwasio obi ebe obu na egosiputara mmasi nke inwe mmasi na imu ihe.
29) Mgbanwe mgbanwe uche mgbe ị na-ekiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na Ịntanetị jikọtara ya na ihe mgbaàmà nke ịntanetị-ikiri ihe nkiri-ikiri nsogbu (Laier & Brand,2016)
[ọchịchọ ka ukwuu / sensitization, obere mmasị] - Ihe odide:
Ihe nchoputa nke ihe omumu a bu na enwere nsogbu nke ihe ojoo nke Intanet (IPD) na inwe obi uto, anya, na obi di nma tinyere obi uto na ndu kwa ubochi na mkpali iji ihe ndi Intanet eme ihe banyere ochicho obi. na izere mmetụta uche. Ọzọkwa, nchekasị nke IPD metụtara ọnọdụ na-adịghị mma na mgbe ọ na-ele ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n 'Intanet yana mmụba nke ọnọdụ dị mma na nke dị jụụ.
Mmekọrịta dị n'etiti ọchịchọ dị na IPD na ịchọsi ike na-achọ n'ihi iji ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na-arụ ọrụ ntanetị gosipụtara site na nyocha nke afọ ojuju nke orgasm nwere ahụmahụ. N'ozuzu, nsonaazụ nke ọmụmụ ihe ahụ kwekọrọ n'echiche bụ na IPD nwere njikọ na mkpali ịchọta agụụ mmekọahụ na iji zere ma ọ bụ ịnagide mmetụta uche na-enweghị isi yana nkwenye na ọnọdụ mgbanwe ọnọdụ na-eso ihe oriri na-akpali agụụ mmekọahụ nwere njikọ na IPD (Cooper et al., 1999 na Laier na Brand, 2014).
30) Mmekọahụ na-adịghị mma nke ndị na-eto eto: Mkpakọrịta dị iche iche na-agbanwe agbanwe (2016)
[ọrụ dara ogbenye na-arụ ọrụ] - Ndị mmadụ n'otu n'otu nwere Nsogbu Mmekọahụ (PSB) gosipụtara ọtụtụ adịghị ike neuro-cognitive. Nchọpụta ndị a na-egosi ịda ogbenye ọrụ nchịkwa (hypofrontality) nke bu ụbụrụ ụbụrụ na-apụta na ndị ọgwụ ọjọọ riri ahụ. Ihe ole na ole:
Otu onye a ma ama sitere na nyocha a bụ na PSB na-egosi mkpakọrịta dị ịrịba ama na ọtụtụ ihe ndị na-emetụta ọrịa, gụnyere ịda mbà nke onwe, ọdịda dị elu nke ndụ, elu BMI, na ọnụọgụ dị elu maka ọtụtụ nsogbu ...
... ọ ga-ekwe omume na akụkụ ahụike ndị a chọpụtara na òtù PSB bụ n'ezie nsonaazụ nke ụtụ isi nke na-eme ka PSB na ndị ọzọ na-ahụ anya. Otu ihe nwere ike ịmejuputa ọrụ a nwere ike ịbụ mmezigharị neurocognitive nke akọwapụtara na òtù PSB, karịsịa ndị na-emetụta ncheta ọrụ, njigide na mkpali, na mkpebi. Site na njirimara a, ọ ga-ekwe omume ịchọpụta nsogbu ndị na-apụta na PSB na ihe ndị ọzọ gbasara ahụike, dị ka dysregulation mmetụta uche, ka ọ bụrụ ihe ndị na-adịghị mma.
Ọ bụrụ na nsogbu nsogbu ndị a chọpụtara na nyocha a bụ akụkụ bụ isi nke PSB, nke a nwere ike ịnwe mmetụta dị egwu.
31) Methylation nke HPA Axis yiri Genes na Men na Nsogbu Mmekọahụ (Jokinen et al, 2017)
[mmeghachi omume nrụrụ na-adịghị arụ ọrụ, mgbanwe epigenetic] - Nke a bụ usoro nke #16 n'elu nke chọpụtara na ndị na-eri ahụ nwere mmekọahụ na-enwe usoro nrụgide dysfunctional - mgbanwe na-emechi neuro-endocrin kpatara site na ahụ riri ahụ. Nnyocha a na-amụ ugbu a bụ epigenetic mgbanwe na mkpụrụ ndụ ihe nketa na-etinyere mmeghachi omume nke nrụgide mmadụ na njikọta ahụ metụtara ya. Na epigenetic mgbanwe, ọ dịghị agbanwe usoro DNA (dịka o mere na ngbanwe). Kama nke ahụ, a na-akpọ mkpụrụ ndụ ya na okwu ya na-agbanye ma ọ bụ ala (obere video na-akọwa epigenetics). Mgbanwe nke epigenetic nke a kọrọ na ọmụmụ a mere ka arụ ọrụ nke CRF gbanwee. CRF bụ neurotransmitter na hormone na-asọ mgbochi àgwà dị ka ọchịchọ, ma ọ bụ onye isi egwu na ọtụtụ n'ime ihe mgbaàmà ndị na-ewepụ ya na njikọ ihe na ịṅụ ọgwụ ọjọọ, gụnyere ịṅụ ọgwụ ọjọọ.
32) Inyocha Mmekọahụ n'etiti Mmekọahụ na iwepụ uche na Okwu Mmekọahụ na Mkpakọ nke Ndị Na - arụ Ọrụ Na - enwe Mmekọahụ (Albery et al., 2017)
[mmeghachi omume ka ukwuu / sensitization, deensitization] - Ọmụmụ ihe a na-eme nchọpụta nke ihe ọmụmụ 2014 Cambridge University, bụ nke jiri nlezianya anya nke ọgwụ ọjọọ na-eme ka njide ahụ ike. Nke a bụ ihe dị ọhụrụ: Ọmụmụ ihe ahụ jikọtara "afọ agụụ mmekọahụ" na 1) ọtụtụ ịṅụ ọgwụ ike mmekọahụ nakwa 2) ihe si arụ ọrụ nlekọta anya. N'etiti ihe ndị ahụ dị elu na-eri ahụ mmekọahụ, afọ ole na ole nke inwe mmekọahụ na-emetụta ụbụrụ na-adọrọ mmasị karị (nkọwa nke nleghara anya anya).
Ya mere, mkpali nke mmekọahụ dị elu + afọ ole na ole nke inwe mmekọahụ = ihe ịrịba ama dị ukwuu nke ị addictionụ ọgwụ ọjọọ (nlezianya anya, ma ọ bụ nnyonye anya). Mana nlezianya anya na-adaba na ndị ọrụ mmanye, na-apụ n'anya na ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke afọ nke ahụmịhe mmekọahụ. Ndị ode akwụkwọ kwubiri na nsonaazụ a nwere ike igosi na afọ ole na ole nke "ịkwa iko" na-eduga n'ọdịdị ka mma ma ọ bụ na-agwụ ike nke mmeghachi omume obi ụtọ (deensitization). Ihe si na nkwubi okwu:
Otu nkọwa ga - ekwe omume maka nsonaazụ ndị a bụ na dịka nwoke na - eme mmekorita nwoke na nwanyị na - eme omume na - akpachi anya, a na - ahụkarị esemokwu metụtara mkparịta ụka [36–38] na oge na - agafe, a chọrọ omume ga - eme ka mmekọrịta nwoke na nwanyị sie ike. Ọ gara n’ihu ikwu na ka mmadụ na-etinyekwu aka na akparamaagwa, neuropathways na-echezi ka enwekwu agụụ mmekọahụ ma ọ bụ onyonyo ma bụrụkwa ndị mmadụ n'otu n'otu na-agbanye agam n’ihu iji mezuo agụụ a chọrọ. Nke a dabara n'ọrụ na-egosi na ụmụ nwoke ‘ahụ siri ike’ na-eme ka ọ bụrụ nke a na-amụrụ anya ka oge na-aga nke ọma na-emekwa ka mmeghachi omume agụụ na-agụsi ike kwụsịlata.
Nke a na-egosi na ndị nnọchi anya na-enwekwu mmekọ nwoke na nwanyị abụrụla 'ọnya' ma ọ bụ nwekwuo mmasị na okwu metụtara 'mmekọrịta nwoke na nwanyị' nke ejiri n'ọmụmụ ihe dị ugbu a ma dị ka ngosipụta dị otú ahụ belata nlebara anya, ebe ndị nwere oke ume na obere ahụmịhe ka gosipụtara nnyonye anya. maka na ihe mkpali na-egosiputa ihe otutu nwere uche.
33) Ndị isi na-eme ka ndị nwoke na-enwe mmekọahụ na-agwụ ike na ndị na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị na-enwe mmekọahụ tupu na mgbe ha na-ekiri ihe nkiri Erotic (Messina et al, 2017)
[ọrụ dara ogbenye dara ogbenye, nnukwu ọchịchọ / sensitization] - Ngosipụta na porn metụtara ọrụ ndị isi na ụmụ nwoke nwere "omume mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ," mana ọ bụghị njikwa ahụ ike. Ndị isi na-adịghị arụ ọrụ mgbe ekpughere ha n'ihe metụtara njiri ahụ bụ ihe njirimara nke nsogbu ihe (na-egosi ha abụọ gbanwee ụzọ sekọndrị na sensitization). Ihe odide:
Nchọpụta a na-egosi mgbanwe uche dị mma karịa mmetọ mmekọahụ site na njikwa ma e jiri ya tụnyere ndị na-emetụta mmekọahụ. Ihe ndekọ ndị a na-akwado echiche ahụ na ndị ikom na-amanye mmekọahụ na-eme ka ha ghara iji uru nke mmụta nwere ike inweta site na ahụmịhe, nke nwere ike ịmalite ime mgbanwe nke ọma. A pụkwara ịghọta nke a dịka enweghi mmetụta mmụta site n'aka ndị na-eme ka nwoke na nwanyị nwee mmekọahụ mgbe ha na-akpali agụụ mmekọahụ, dị ka ihe na-eme mgbe ị na-enwe mmekọahụ, nke na-amalite site na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke na-enwe mmekọahụ, na-esite n'inwe mmekọahụ edemede na mgbe ahụ orgasm, na-ejikarị emetụta ọnọdụ ndị nwere nsogbu.
34) Ihe Ịgba Ọgụ na-akpali agụụ mmekọahụ? Ihe omumu gbasara FMRI nke ndi mmadu na - acho oria maka ihe ojoo na -Gola et al, 2017)
[mmeghachi omume / mmetụta dị ukwuu karị, mmeghachi omume dị mma] - Ihe ọmụmụ fMRI nke metụtara ihe ngosi-reactivity pụrụ iche ebe ọdịdị ndị na-anọghị na mbụ buru amụma banyere ọdịdị nke foto ndị gba ọtọ. Ederede:
Ụmụ nwoke ndị na-enweghi nsogbu porn (PPU) dị iche na ụbụrụ na-emeghachi omume na-ebu amụma na-akpali agụụ mmekọahụ, ma ọ bụghị na mmeghachi omume na-emetụ onwe ha foto, na-adabere na nkwalite mmụta na-edozi ahụ. Ụbụrụ ụbụrụ a na-esonyere site n'inwe mkpali omume na-ele ihe oyiyi ero (elu 'chọrọ'). Mmeghachi omume na-edozi anya nke na-ese onyinyo foto ndị na-adịghị mma na-emetụta oke PPU, ọnụ ọgụgụ nke ikiri ihe na-eji kwa izu na ọnụ ọgụgụ nke masturbations. Nchoputa anyị na-atụ aro na dịka ihe eji eme ihe na ịgba chaa chaa na-eme ka usoro mmezi na usoro omume jikọtara na nhazi nke ihe ndekọ dị mkpa maka atụmatụ PPU. Nchọpụta ndị a na-egosi na PPU nwere ike na-anọchite anya oria omume na omume ndị na-enye aka na ichebe omume na ịṅụ ọgwụ ahụ na-echebara echiche maka mmegharị na iji nyere ndị mmadụ aka na PPU.
35) Ihe omuma na ihe omuma nke ihe omuma: Ndi ha nagide ugbua n'eji ihe ndi ozo eme ihe? (Kunaharan et al., 2017)
[habituation or desensitization] - Ọmụmụ ihe nyochare azịza nke ndị na-egwu egwu (ọgụgụ EEG & mmalite mmalite) na onyonyo dị iche iche na-akpali mmetụta - gụnyere erotica. Ọmụmụ ihe ahụ hụrụ ọtụtụ ọdịiche dị n'etiti ndị na-egwu egwu egwu na ndị na-egwu egwu. Ederede:
Nchọpụta na-egosi na ọnụ ọgụgụ ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-egosi na ọ nwere mmetụta na mmeghachi omume nke ụbụrụ na-emeghachi omume na mmepụta mmetụta uche nke na-egosighi site n'onwe ya.
4.1. Nkọwa doro anya: Ọmarịcha, nnukwu porn na-eji otu na-ahọrọ ihe oyiyi dị ka ihe na-adọrọ mmasị karịa ndị na-ajụ usoro. Ndị dere na-egosi na nke a nwere ike ịbụ n'ihi ọdịdị "dị nro" nke "ihe ndị na-asọ oyi" nke dị na IAPS nchekwa data na-enyeghị ọkwa nke mkpali na ha nwere ike ịchọpụta, dị ka Herper na Hodgins gosipụtara ya  na site n'lele ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ugboro ugboro, ọtụtụ ndị mmadụ na-agbadakarị ele ihe ndị siri ike iji nọgide na-enwe otu ihe ahụ metụtara agụụ.
Emotiondị obi ụtọ "atọ" hụrụ ụzọ ọkụ ọkụ niile nke otu atọ a ka ọ dị ka o yie ya na ndị otu ya dị elu na-egosi ihe na-adịghị mma karịa ndị otu ndị ọzọ. Nke a nwere ike ịbụ ọzọ n'ihi ihe onyonyo “mma” ndị a na-egosi na ha anaghị eme ka ndị mmadụ nọ n'otu ebe ahụ zuo ezuo. Ihe omumu emere gosiputa onodu ihe ojoo site na nhazi nke ihe uto n'ihi ihe ndi mmadu na acho ihe ndi mmadu n’eme ihe.3, 7, 8]. Ọ bụ arụmụka ndị dere na mmetụta a nwere ike ịkọ maka ihe ndị e mere.
4.3. Mmetụta Mmetụta Mgbagharị Malite (SRM): Ụdị nhụsianya dị elu nke mgbagwoju anya nke dị na ndị na-agba ma ọ bụ nke na-asọ oyi na-eji otu dị iche iche nwere ike ịkọwa ya na ndị nọ n'ìgwè ahụ na-ezere iji ihe ndị gba ọtọ, ebe ọ bụ na ha nwere ike ịchọpụta ya dịka ihe na-adịghị mma. N'aka nke ọzọ, ihe ndị a nwetara nwekwara ike ịbụ n'ihi mmetụta nke omume, ebe ndị mmadụ n'otu n'otu a na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ karia ka ha kwupụtara n'ụzọ doro anya-ikekwe n'ihi ihe ihere nke ndị ọzọ, ebe ọ bụ na e gosipụtara mmetụta dị iche iche na-eme ka ọnụ ọgụgụ na-egbuke egbuke zaa ajụjụ ndị a [41, 42].
36) Ihe ngosi nke ihe gbasara mmekorita nwoke na nwanyi na-akpata mmelite ka ukwuu nke na-eduga n'inwekwu ọganihu na ụmụ mmadụ na Cyber.Cheng & Chiou, 2017)
[arụ ọrụ dara ogbenye, nnukwu impulsivity - kpatara nnwale] - Na nyocha abụọ ọhụụ na-akpali agụụ mmekọahụ na-akpata: 1) iwelata ego na-egbu oge (enweghị ike igbu oge agụụ), 2) ọchịchọ ka itinye aka na cyber-delinquency, 3) ọchịchọ ka ukwuu ịzụta adịgboroja ngwongwo na mbanye anataghị ikike mmadụ Facebook akaụntụ. Ikpokọta nke a na-egosi na iji egwu porn na-abawanye impulsivity ma nwee ike belata ụfọdụ ọrụ njikwa (njide onwe onye, ​​ikpe, ịkọwapụta nsonaazụ, njikwa mkpali). Mmepụta:
Ndị mmadụ na-ezutekarị mmekọahụ mgbe ha na-eji Intanet eme ihe. Nnyocha e mere egosiwo na ihe ndị na-akpali akpali na-akpali agụụ mmekọahụ nwere ike ime ka ndị mmadụ ghara inwe nchekasị, dị ka egosipụtara na nkwụsị nke ukwuu (ntụgharị, ọchịchọ nke ịhọrọ obere, uru ozugbo iji buru ibu, ọdịnihu).
N'ikpeazụ, ihe ndị dị ugbu a na-egosi njikọta n'etiti mmekorita nke mmekọahụ (dịka, ikpughe foto nke ụmụ nwanyị nwere mmekọahụ ma ọ bụ ịkwa iko na-akpali agụụ mmekọahụ) na ime ụmụ nwoke na-etinye aka na cyber. Nchoputa anyi na-egosi na enweghi ike imeru onwe ya na njide onwe onye, ​​dika egosiputa site na ngbaghari oge, enwere ike idi uzo n'iru ihe omumu nke nwanyi. Ndị mmadụ nwere ike irite uru na nlekota oru ma ọ bụrụ na ịmalite ime ihe gbasara mmekọahụ ga-ejikọta nhọrọ na omume ndị na-adịghị mma. Nchọpụta anyị na-atụ aro na ịbịakwute mmekorita nke mmekọahụ nwere ike ime ka ndị mmadụ gbadaa n'okporo ụzọ cyber
Nsonaazụ ndị a na-egosi na nnukwu nnweta nke mmekorita nwoke na nwanyị na netwọk nwere ike inwe njikọ chiri anya na omume ndị na-eme ka ndị na-eme nchọgharị na weebụ karịa ka e chere.
37) Ndị Predictors maka (Nsogbu) Iji Intanet eme ihe n'ụzọ doro anya: Nrụkọahụ nke ịmalite ịlụ nwoke na nwaanyị ịbịaru nso na -Stark et al., 2017)
[mmeghachi omume ka ukwuu / sensitization / cravings] - Ihe odide:
Ọmụmụ ihe a na-enyocha ugbu a mere nchọpụta ma esemokwu mmekọahụ na ọchịchọ dị iche iche maka inwe mmekọahụ bụ ndị na - akọ banyere nsogbu SEM na - enwe nsogbu na oge a na - ekiri SEM. N'ime nnwale nke omume, anyị jiri Task-Avoidance Task (AAT) mee ihe iji chọpụta ihe niile gbasara mmekọahụ. Enwere ike ịkọwa mmekọrịta dị mma n'etiti ntụgharị uche doro anya banyere SEM na oge a na-ekiri SEM site na mmetụta dị iche iche: A ghaghị ịkọwa ọchịchọ dị elu nke dị nro dị ka nlezianya anya megide SEM. Otu isiokwu nke nwere nlezianya anya nke a nwere ike ịmasị mmasị n'inwe mmekọahụ na Intanet nke na-akpata oge dị elu karịa na saịtị SEM.
38) Achọpụta ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na-adabere na Nchọpụta Ngwá Ọrụ Neurophysiological (2018)
N'akwụkwọ a, a na-enye usoro iji iji akara ụbụrụ aka site na mpaghara ihuala weghaara iji EEG chọpụta ma onye ahụ ga-enwe ike ịṅụ ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ. Ọ na-eme dị ka ihe na-emekọ ọnụ maka ajụjụ ọnụ ọgụgụ mmadụ. Ihe ngbachara anya na-egosi na ndị na-eri ahụ riri ahụ nwere obere ogugu mkpụrụ edemede alpha na frontal brain region compared to those non-addicted participants. Enwere ike ịhụ ya site na iji nsonye ike mee ihe site na iji obere ala mkpebi Electromagnetic Tomography (LORETA). Ndị agha ahụ na-egosikwa na e nwere ọdịiche dị n'etiti ndị ahụ riri ahụ na ndị na-abụghị ndị riri ahụ. Otú ọ dị, ọdịiche ahụ abụghị ihe doro anya dị ka mkpụrụ akwụkwọ alpha.
39) Ihe na-akpata grey deficits ma gbanwee njikọta izu ike na steeti na-ahụkarị n'etiti ndị mmadụ nwere nsogbu imebiga ihe ókè na nsogbu (2018)
[isi awọ adịghị arụ ọrụ na anụ ahụ anụ ahụ, njikọta arụmọrụ na-abaghị uru n'etiti anụ ahụ na preuneus & caudate] - Ihe ọmụmụ fMRI na-atụle nlezianya kpachapụrụ anya nke ndị mmekọahụ riri ahụ ("nsogbu nsogbu mmekọahụ rụrụ arụ") na isiokwu njikwa ahụike. E jiri ya tụnyere njide mmekọahụ riri ahụ nwere: 1) belata ihe isi awọ na lobes nke oge (mpaghara ndị metụtara igbochi agụụ mmekọahụ); 2) belata preuneus ka temporal cortex arụ ọrụ njikọta (nwere ike na-egosi nhụsianya na ikike ịgbanwee uche); 3) belata caudate na njikọta arụ ọrụ nke anụ ahụ (nwere ike igbochi njikwa elu-ala nke mkpali). Ederede:
Nchọpụta ndị a na-atụ aro na ụkọ ngwụcha nke na-arụ ọrụ nke na-ahụkarị na ntanetị na-arụ ọrụ dị iche iche (nke bụ, preponus na caudate) nwere ike itinye aka na nsogbu ndị a na-egbochi agụụ mmekọahụ na ndị nwere PHB. N'ihi ya, ihe ndị a na-egosi na mgbanwe na nhazi na arụmọrụ dị na gyrus nwere ike ịbụ PHB pụrụ iche ma nwee ike bụrụ ndị na-emepụta ihe ndị na-emepụta biomarker maka nyocha nke PHB.
A na - ahụkwa okwu grey na nnukwu nri ọka ụbụrụ na ụba ụbụrụ nke aka ekpe na n'aka ekpe STG .... Ya mere, ọ ga-ekwe omume na ụda olu gọọmenti na arụ ọrụ na cerebellum jikọtara ya na akpa ike na ndị nwere PHB.
Na nchịkọta, VBM dị ugbu a na nchọpụta njikọta arụmọrụ gosipụtara nsogbu deficit na arụ ọrụ gbanwere agbanwe na gyrus dị n'etiti ndị nwere PHB. Nke ka mkpa bụ na njikọta na-arụ ọrụ na arụmọrụ arụkọtara na-adabaghị na mmekọrịta nke PHB. Nchọpụta ndị a na-enye nghọta ọhụrụ n'ime usoro ihe ndị na-adịghị mkpa nke PHB.
40) Nchọpụta maka nsogbu ịntanetị na-eji eme ihe na-akpali agụụ mmekọahụ: Esemokwu dị n'etiti ndị ikom na ndị inyom banyere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ (2018)
[mmeghachi omume ka ukwuu / sensitization, mmụba ka ukwuu]. Ihe odide
Ọtụtụ ndị edemede na-atụle ịntanetị-iji ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ (IPD) dị ka nsogbu riri ahụ. Otu n'ime usoro a na-amụ nke ọma n'ihe banyere ọrịa na-enweghị isi na-ejighị ya eme ihe bụ nlezianya nke nlebara anya maka njiri metụtara ahụike. A kọwara nlezianya anya dị ka usoro ntụgharị uche nke nghọta mmadụ na-emetụta site na njirimara metụtara ahụ riri ahụ site na nhụsianya na-akpali akpali nke ihe ahụ n'onwe ya. A na-eche na ihe nlereanya I-PACE na ndị mmadụ n'otu n'otu na-enwekarị ike ịmalite mgbaàmà IPD na-egosi nghọta dị iche iche yana mmeghachi omume na agụụ na-agụsi ma bilie n'ime usoro ahụ riri ahụ. Iji nyochaa ọrụ nke nlezianya anya na mmepe nke IPD, anyị nyochara ihe atụ nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị 174.
Ejiri nlezianya jiri nlezianya mee ihe, nke ndị sonyere ga-emeghachi na akụ na-egosi mgbe foto ndị gba ọtọ ma ọ bụ na-anọpụ iche. Na mgbakwunye, ndị sonyere ga-egosi agụụ mmekọahụ ha na-akpali site na foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Ọzọkwa, a tụrụ iji ọchịchọ IPD atụlee iji Nnwale Ntanetị Intanet. Nsonaazụ nke ọmụmụ a gosipụtara mmekọrịta dị n'etiti ajọ mbunobi na oke mgbaàmà nke IPD nke akọwapụtara nke ọma maka mmeghachi omume na agụụ. Ọ bụ ezie na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-adịkarị iche na oge mmeghachi omume n'ihi foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, nyocha nchịkwa na-egosi na enweghị nlezianya na-eme n'adabereghị na mmekọahụ n'ihe metụtara mgbaàmà IPD. Nsonaazụ ahụ na-akwado echiche nke usoro I-PACE gbasara mmetụ na-akpali agụụ mmekọahụ metụtara njirisi ma daba na ọmụmụ ihe na-ekwu maka mmeghachi omume na agụụ na-arịa ọrịa.
Ihe omumu omumu ndia bu:
3 isi ụbụrụ na-eri ụbụrụ na-agbanwe: sensitization, deensitization, na hypofrontality.
A na-ejikarị ụda egwu na-ejikọta ya na obere isi awọ na nkwụghachi ụgwọ (ụda mgbatị).
Enwekwuwanye ojiji nke porn na-ejikọ na ntinye ọrụ nkwụghachi ụgwọ obere mgbe ị na-ele ihe nkiri mmekọahụ.
A na - ejikọta ụyọkọ porn ndị ọzọ na ịkụghasị njikọ dị n'agbata ụgwọ ọrụ ọrụ na cortex mbụ.
Ndị na-eri ihe na-eme ka ha nwee mmekọahụ, kama ọ bụ obere ụbụrụ ka ha na-emepụta (na-eri ọgwụ ọjọọ).
Ojiji ojiji nke Porn / ikpughe na porn na-etinye aka na nkwụsịtụ oge (enweghị ike ịkwụsị agụụ). Nke a bụ ihe ịrịba ama nke arụ ọrụ njikwa.
60% nke ihe ndị na-agba egwu agụụ mmekọahụ na-agba ume n'otu nnyocha nwere ED ma ọ bụ obere libido na ndị mmekọ, ma ọ bụghị na porn: ha niile kwuru na ị pornụ ịntanetị na-eme ka ED / low libido.
Nlebara anya nke oma tụnyere ndị ọrụ ọgwụ. Na-egosipụta nhazi (a ngwaahịa nke DeltaFosb).
Ọchịchọ na-agụsi agụụ ike & agụụ maka porn, mana ọ bụghị mmasị ka ukwuu. Nke a kwekọrọ na ụdị nnabata nke ahụ riri ahụ - ihe mmetuta.
Ndị na-eme egwuregwu Porn nwere nhọrọ ka ukwuu maka ihe gbasara mmekọahụ ma obi ha nọ na-eme ngwa ngwa na-enwe mmekọahụ. Ọ bụghị tupu oge.
Ndị na-eto eto ndị na-egwu egwu bụ ndị na-eme ka ndị mmadụ nwee mmeghachi omume n'ime ụlọ ọrụ akwụ ụgwọ.
Akwụkwọ EEG (P300) kachasị elu mgbe ndị ọrụ porn gosipụtara na porn cues (nke pụtara na ọgwụ ndị ọzọ).
Enweghi ike inwe mmekorita nwoke na nwanyi ka ha na-eme ka ndi mmadu na-emezi ihe kariri ihe ndi ozo.
A na - ejikarị ụda egwu na - ejikọta na njirimara LPP dị nta mgbe ị na - ele foto foto anya: na - egosi habituation ma ọ bụ desensitization.
Akpa HPA a na-atụghị anya ya na ụbụrụ nchekasị na-agbanwe agbanwe, nke na-apụta na ọgwụ ọjọọ riri ahụ (na ụda olu amygdala, nke metụtara nrụgide na-adịghị ala ala).
Epigenetic gbanwere na mkpụrụ ndụ ihe nketa na-etinyere mmeghachi omume nke nrụgide ụmụ mmadụ ma jikọọ ya na ịṅụ ọgwụ ọjọọ.
Nrịkota kachasị elu nke Necrosis Factor (TNF) - nke na-emekwa iji ọgwụ ọjọọ na ọgwụ ọjọọ eme ihe.
A deficit ke eke cortex isi awọ okwu; enweghị njikọ n'etiti anụ ụlọ na ọtụtụ mpaghara ndị ọzọ